Squid Game ဇာတ်ကားထဲကအရုပ်မ က တကယ့်အစစ်လား?? - Myanmarload
Squid Game ဇာတ်ကားထဲကအရုပ်မ က တကယ့်အစစ်လား??
effect နဲ့လုပ်ထားတာလား...တကယ့်အစစ်လားဆိုတာကိုတော့.... (အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံ ကိုနှိပ်ပါ)
ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပရိတ်သတ်တွေကြား ရေပန်းစား ခေတ်စားနေတဲ့ Squid Game ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်း အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကို တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှာရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး စစပြသချင်းမှာပဲ Rating အရမ်းကိုကောင်းခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းချုပ်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးပြုပြီး အနိုင်ရရှိသူက ဒေါ်လာသန်း(၄၀) ရရှိအောင်ကြိုးစားရတဲ့ Survival Game ကို ယှဥ်ပြိုင်ကစားရတဲ့အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Squid Game ထဲမှာဆိုရင် မီးစိမ်း မီးနီ အော်တဲ့အရုပ်မက ပရိတ်သတ်တွေကြားအထူးရေပန်းစားလျက်ရှိပါတယ်။ဒီအရုပ်ကတော့ တကယ့်အစစ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အရုပ်ကိုတော့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ချွန်းဘုဂ် ၊ Jin Cheon မြို့ ၊ Horse Carriage ရွာကနေ ငှားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။
Netflixမှာ Squid Game မပြသခင်တုန်းက အဲ့အရုပ်မကြီးကို ဗီနိုင်း တွေနဲ့ကာထားပါတယ်။အခု Squid Gameလဲ ပြပြီးရော လူတွေအရမ်းစိတ်ဝင်စားကြလွန်းလို့ အရုပ်ထုတ်လုပ်သူက အဲ့ အရုပ်ကြီးကို နေရာရွှေ့ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတယ်လို့ကြားရပါတယ်။အခုတော့ အရုပ်ကို လာရောက်ကြည့်ရှုသူများပြားနေတဲ့အတွက် အခြားနေရာကို ရွှေ့ထားလိုက်ပြီလို့လည်းကြားသိရပါတယ်။